विश्वकप- ५ः ४५ बजे बेल्जियम भर्सेस टुनिसिया, कस्ले मार्ला बाजी ? - Namaste Times
विश्वकप- ५ः ४५ बजे बेल्जियम भर्सेस टुनिसिया, कस्ले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०९, २०७५ समय: १५:१६:२६
काठमाडौं – रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा शनिबार (आज) ३ खेलहरू हुँदैछन् । आजको पहिलो खेल बेल्जियम र टुनिसियाबीच हुँदैछ । स्पार्टक स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार बेल्जियम र टुनिसियाबीचको खेल ५ः ४५ बजे सुरु हुँदैछ ।
बेल्जियम भर्सेस टुनिसिया
रुस विश्वकप २०१८ अन्तर्गत आज जी र एफका खेल हुदैछ । समुह चरणको दोस्रो खेलमा समुह जी अन्तर्गत बेल्जियम र ट्युनिसिया भिड्दैछ । बेल्जियमले पहिलो खेलमा पानामा माथि तीन गोलको जित निकाल्दै ३ अंक बटुलिसकेको छ, भने उसका प्रतिष्पर्धी टुनिसियाले ईल्याण्डसग दुई एक गोलले पराजित हुदै अंकविहीन बनेको थियो ।
बेल्जियम र टुनिसियाको यस तीन पटक भेट भएको छ । सन् २००२ को विश्वकपको समुह चरणमा भेट हुँदा यी दुई टोलीको खेल एक एक गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो । त्यस्तै १९९२ को सोलिडारीटि कपमा भेट टुनिसियाले हराएको थियो । यी दुईको भेट अन्तिम पटक २०१४ को वामअप म्याचमा हुँदा बेल्जियमले हराएको थियो ।